विश्व प्रसिद्ध डिजाइनरले ल्याए प्रदूषण कम गर्ने यस्तो अनौठो कार, मूल्य कति ? Canada Nepal
विश्व प्रसिद्ध डिजाइनरले ल्याए प्रदूषण कम गर्ने यस्तो अनौठो कार, मूल्य कति ?
आषाढ २७ २०७८
गुड्दै गर्दा वायुबाट प्रदूषण कम गर्ने कार ब्रिटेनको गुडवुड फेस्टिभल अफ स्पीडमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ।ब्रिटिश डिजाइनर थोमस हिथरविकले निर्माण गरेको एरो कार सन् २०२३ मा चीनमा उत्पादन हुने बताइएको छ।
सो कार प्रदूषण कम गर्ने गरी मात्र नभई ठाउँको पनि बचत हुनेगरी बनाइएको हिथरविकले बताएका छन्। तर आलोचकहरूले यो कार प्रदर्शनीका लागि मात्रै उपयुक्त हुने भन्दै शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
हिथरविक गुगलको क्यालिफोर्निया र लन्डनको कार्यालय एवम् लन्डनको रुटमास्टर बस डिजाइन गरेर विश्व चर्चित बनेका डिजाइनर हुन्।उनले बीबीसीलाई आफूले यसअघि कहिल्यै कार डिजाइन नगरेको तर चिनियाँ निर्माताको सोचले प्रभावित भएको बताए।
"म हुर्कँदै गर्दा नयाँ-नयाँ कारले नै डिजाइनलाई प्रतिनिधित्त्व गरेका थिए," उनले भने। "चीनको आईएम मोटर्सले मसँग सम्पर्क राख्दा मैले भनेँ कि हामी कार डिजाइन गर्दैनौँ। जवाफमा उनीहरूले त्यही भएर हामीलाई डिजाइन गर्न लगाउन खोजेको बताए।"
गत एप्रिलमा साङ्घाई कार प्रदर्शनीमा पहिलोपटक देखाइएको सो कारमा ठूलो सिसाको छानो छ। भित्र भने कोठा जस्तो गरी यताउता सार्न र खाट बनाउन मिल्ने मेच र खाना वा बैठकका लागि सानो टेबुल छ।
यसको ह्यान्डल लुकाउन मिल्छ र बाहिर पानीको छालजस्तो बनाइएको छ। "कार निर्माताहरू विद्युतीय कार बनाउन लागिपरेका छन् तर नयाँ विद्युतीय कार फरक खालको उस्तै कार हुनु हुँदैन," हिथरविकले भने।
एरोको बाहिरी भागले हावाको बहावलाई मात्रै प्रतिबिम्बित नगरी अगाडिको भागले एक वर्षमा एउटा टेनिसबल जति हावाको प्रदूषित कण सङ्कलन गर्ने हिथरविकले बताए।
"त्यो धेरै जस्तो सुनिँदैन तर तपाईँको फोक्सोमा टेनिस बल जति प्रदूषित कण सोच्नुभयो भने यसले वायु सफा गर्न मद्दत गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। चीनमा मात्रै लाखौँ यस्ता कार चल्दा यसले निकै प्रदूषण कम गर्छ।"
यो कार दुवै मानिसले चलाउन मिल्ने र आफै चल्ने खालको उत्पादन गरिने बताइएको छ।कार्डीफ बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक पिटर वेल्सले भने: "म यो कारले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने देख्दिनँ।" "यसले सहरी क्षेत्रमा वायु सफा गर्ने कुरा यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई नाप्नै सकिन्न।"
यो कारको अर्को ठूलो सोच भनेको यसको भित्री भागको थप प्रयोग हो। "कोभिडले स्थानको अभाव देखाएको छ। हामी धेरै घरमा बसेका छौँ र पढ्न वा काम गर्न थप ठाउँ चाहिएको छ," हिथरविकले भने।
"संसारभर एक अर्ब कार छन् जुन मानिसले १० प्रतिशत समय मात्रै प्रयोग गर्छन् जसका कारण कार बहुमूल्य जग्गा बन्न सक्ने अवस्था छ।" विमानमा सुत्न, खान र काम गर्न मिल्ने प्रथम श्रेणीको सीटबाट प्रेरणा लिएको हिथरविकले बताए।
"नगुड्दा कार सामाजिक गतिविधिको स्थल बन्न सक्छ।" यो कारको मूल्य लगभग ४०,००० पाउन्ड पर्ने बताइएको छ।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
आषाढ २७, २०७८ आइतवार ०८:५६:१२ बजे : प्रकाशित
# अनौठो कार